The winners are... : WTTC 2018 Tourism for Tomorrow Awards | Breaking Travel News
Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Abaphumeleleyo yile…: EzoKhenketho zeWTTC 2018 zamabhaso angomso
Abaphumeleleyo yile…: EzoKhenketho zeWTTC 2018 zamabhaso angomso
I-WTTC iyavuya ukwazisa iinkokheli ze-2018 kukhenketho oluzinzileyo kumsitho wama-2018 woKhenketho ngoMsitho wamaBhaso. Amabhaso, anikezelwa kumsitho okhethekileyo ngethuba leNgqungquthela yeHlabathi ye-WTTC ye-18 eBuenos Aires, eArgentina, ibhiyozela amaphulo okhuthazo, nawokutshintsha kwezokhenketho kwihlabathi liphela.
Abaphumeleleyo beeMbasa ze-2018 banconywa kakhulu kwaye bayanakanwa ngenxa yezenzo zeshishini zezona mgangatho ziphezulu zilungelelanisa iimfuno 'zabantu, iplanethi kunye nenzuzo' kwicandelo lethu. Abaphumeleleyo kulo nyaka ziinkokeli zeshishini ezikhuthaza ukukhula okubandakanya wonke umntu, kwaye zisebenzela ikamva eliluhlaza ngenxa yegalelo labo lophuhliso oluzinzileyo kunye neeNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo ze-UN (SDGs).
Abaphumeleleyo boKhenketho boMso wangomso ngo-2018 zezi:
Igalelo loLuntu-i-Himalayan Expedition, e-India
Ibhaso lokuya -uMbutho wezoKhenketho waseThompson Okanagan, eBritane yaseColombia, eCanada
Ibhaso lokusingqongileyo-Igunya lesikhululo seenqwelomoya eHong Kong, Hong Kong
Ibhaso lokuyila-iVirgin Atlantic, e-UK
Amabhaso aBantu-Ingqokelela yeCayuga yeehotele ezinokuthenjwa kunye neeLodges, eCosta Rica
Amabhaso agwetywa yiphaneli yeengcali ezizimeleyo, ekhokelwa nguGraham Miller, uMlawuli oyiNtloko, iFakhalthi yoBugcisa kunye nezeNzululwazi yezeNtlalo kwiYunivesithi yaseSurrey. Izifundiswa, iinkokheli zeshishini, ii-NGO kunye nabameli bakarhulumente bonke badibanisa imikhosi yokujongela phantsi abo bafikelele kumagqibela kankqoyi baba bahlanu kuphela abaphumeleleyo. Ukuba ngumgwebi wezoKhenketho ngomso ayingomsebenzi omele uthathwe kancinci - inkqubo engqongqo yokugweba enezigaba ezithathu ibandakanya uphononongo olucokisekileyo lwazo zonke izicelo, zilandelwe kuvavanyo olwenziwa kwisiza saBokugqibela kunye nelinge labo.
Abaphumeleleyo kudidi ngalunye bachongwa yikomiti yabaphumeleleyo echongwe ngu-Fiona Jeffery OBE, uSihlalo woKhenketho ngeeMso, kunye no-Sandra Howard Taylor, usekela-mphathiswa wezoRhwebo, uShishino kunye noKhenketho eColombia; UJohn Spengler, uMlawuli weZiko lezeMpilo kunye neNgqongileyo yeHlabathi yeSikolo seHarvard seMpilo yoLuntu; kunye noDarrell Wade, uMseki-ntsapho kunye ne-CEO yeQela eliGwenxa.
UGloria Guevara Manzo, uMongameli kunye ne-CEO, iWTTC, uphawule:“Kulo nyaka abagqwesileyo bokuwongwa ngembasa yezoKhenketho kungomso bangqina ubungqina bokuba iyantlukwano kwaye ibandakanya konke ukuzibophelela kwecandelo lethu kuhlumo oluzinzileyo. Amanqanaba amabhaso ayilelwe ukubonisa ukuba wonke umdlali okwishishini lezoKhenketho noKhenketho unendima ayidlalayo ekuqhubeni eli candelo kwikamva elinoxanduva - nokuba kungokubonelela ngoqeqesho kubantu abasuka kwiindawo ezihlelelekileyo, ukukhusela iindawo ezibalulekileyo zemigxobhozo ngokusebenzisa ukhenketho lwezendalo okanye ukusebenza kwehlabathi kwesona sikhululo seenqwelomoya esiluhlaza. Ndivuyisana nabo bonke ngempumelelo yabo kunye nobunkokeli babo.
Abaphumelele amabhaso alo nyaka ababonakalisi kuphela ukuba ukhenketho lunokuzinza, kodwa lubonelela ngezibonelelo ezibonakalayo kwiindawo zokufikela, uluntu lwasekhaya kunye nabahambi. Sinethemba lokuba abo baphumelele amabhaso ethu bazakukhuthaza icandelo lezoKhenketho noKhenketho ukuba libe yinxalenye yelizwe elizinzileyo. ”
UFiona Jeffery, i-OBE, uSihlalo, uKhenketho lweWTTC lwaMabhaso aNgomso, uthe: “Indima yeTourism for Tomorrow Awards kukubonisa eminye yemizekelo ebalaseleyo yezokhenketho oluzinzileyo kwihlabathi nokukhuthaza nokukhuthaza ishishini lethu ukuba libe yinguqu esifuna ukuyibona nokuyibona. Abokugqibela boKhenketho ngomso we-2018 kunye nabaphumeleleyo babonisa umbono, ubunkokeli, kunye nokuzibophelela kwexesha elide ekuqinisekiseni ukuba ishishini lethu lijolise ekudaleni iindawo ezingcono zokuhlala kwabantu kunye neendawo ezingcono zokutyelelwa ngabantu. Kulo nyaka nangona kunjalo sibone intsebenziswano kumacandelo ngamacandelo kunye nokuvuma ukuba amanyathelo angathathwa kwaye kufuneka athathwe ukuvavanya iimpembelelo zokhenketho ngokukuko nolu khuthazo. ”
UJeff Rutledge, i-CEO, i-AIG Travel, abaxhasi abaziintloko bamaBhaso, uthe: “Ukusukela ekusebenzeni kwesona sikhululo seenqwelomoya esiluhlaza ukuya ekumiseni ipaki yokuqala yaselwandle e-Afrika, abakhenkethi abakhenkethi kulo nyaka bangomso liqela elahlukileyo labenzi beenguqu kwihlabathi liphela. Abaphumeleleyo ngo-2018 babonisa ukuba ngaphandle kobungakanani okanye injongo, onke amashishini akwicandelo loKhenketho noKhenketho angenza uzinzo lube yinto ephambili kwaye abe yinxalenye yohambo oluhlangeneyo oluya kwikamva eliluhlaza. ”
Ngolwazi oluthe kratya kuKhenketho lwaMabhaso aMso nangabo bonke abaphumeleleyo, nceda undwendwele www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards
Uluhlu olupheleleyo lwaBaphumeleleyo kunye nabaGqwesileyo:
WINNER-Global Himalay Expedition, India
WOKUGQIBELA-nangaphaya kwayo, Mzantsi Afrika
ISIQINISEKISO-IZiko loPhuhliso oluZinzileyo iMamirauá, eBrazil
WINNER-Thompson Okanagan Umbutho wezoKhenketho, iBritane Colombia
ISIQINISEKISO-Isiseko seRiverwind, uJackson Hole, eWyoming, e-USA
UKUGQIBELA-Corporación Parque Arví, Colombia
WINNER-Isikhululo senqwelomoya eHong Kong, Hong Kong
WOKUGQIBELA-IsiQithi seChumbe eCoral Park, eTanzania
UQOQOSHO -Melia Hotels International, eSpain
WINNER - iVirginia yeAtlantic, eUK
ISIQINISEKISO-IParkbus - uKhetho lwezoThutho, eCanada
ISIQINISEKISO-Yayasan Karang Lestari Teluk Pemuteran (iPemuteran Bay Coral Protection Foundation), Indonesia
WINNER-Ukuqokelelwa kweCayuga yeehotele ezinzileyo kunye neeLodges, eCosta Rica
WOKUGQIBELA-Ilifa leMveli, eOstreliya
UKUGQIBELA-UMTHETHO Umanyano, eCambodia
Malunga noKhenketho lwaMabhaso aNgomso:
Iinkcukacha ezithe kratya kumabhaso kunye nenkqubo yesicelo inokufumaneka http://wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/
Amaqabane oKhenketho ngeBhaso laNgomso:
Umxhasi oyintloko woKhenketho lwaMabhaso aNgomso: I-AIG Travel Inc.
Umxhasi weBhaso loLuntu: Ixabiso lokuThengisa
Umxhasi weBhaso lokuFikela: Indawo yeLas Vegas kunye neGunya labandwendweli
Umxhasi weBhaso lokusiNgqongileyo: i-Ecolab
Umxhasi weBhaso lokuSungula: Amadeus
Umxhasi weBhaso laBantu: Mastercard
Umbutho woRhwebo loKhenketho (i-ATTA)
Umbutho wezohambo noKhenketho e-Afrika (i-ATTA)
Inethiwekhi yotyelelo lwaseAsia (AEN)
Ukhenketho loRhwebo oluLungileyo (FTT)
IBhunga lezoKhenketho eliZinzileyo leHlabathi (i-GSTC)
IGreenHotelier / uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe
Umbutho wohambo lwePacific Asia (PATA)
IiTony Charters kunye nabaDibeneyo
Ukuhamba + ngeNtlalontle